Al Shabaab oo baahisay cododka kooxdii geysatay Xasuuqii Ambassador – VIDEO | shumis.net
Home » News » Al Shabaab oo baahisay cododka kooxdii geysatay Xasuuqii Ambassador – VIDEO
Kooxda Al Shabaab ayaa baahisay cododka kooxdii geysatay weerarkii Argagaxiso ee lagu qaaday Hotel Ambassador ayaa sheegay inay dhamaan dadkii hotelka ku jiray ay dileen, iyagoo xiligaasi xasuuq ka dhex waday Hotelka.
Codka ay baahisay idaacada kooxda Al Shabaab ee Andalus ayaa ah cod telefoonka looga duubay kooxda hotelka gashay qaarkood, iyadoo idaacada Al Shabaab sii buun buunisay tirada dhimashada oo ay ku sheegeen 40 qof.
“…Muslimiinta waxaan ugu bishaareynaynaa halaaga gaalada gaartay…” ayuu yiri mid kamid ah kooxdii weerarka geysatay oo magaciisa lagu sheegay Jaabir Yare oo ku hadlayey lahjada Maay-Maayga kanamid ahaa raggii ay ugu danbeyntii dileen ciidamada amaanka ee Gaashaan.
Sida ka muuqatay cododka dhalinyaradan ayaa ahaa kuwoo aad u da’a yar.
Inkastoo kooxdan Al Shabaab ku faantay inay gaalo iyo ajnabi ku dileen weerarkaasi, balse dhamaan dadka ku dhintay weerarkan ayaa ahaa Soomaali muslimiin ah. Waxayna hadaladooda muujineysaa heerka uu gaarsiisan yahay fikirkooda xagjirnimada ah iyo in dadka ay xasuuqeen ee rayidka ah u arkaan gaalo. Waxaase la yaableh in isla kooxdaasi ay hadaladooda ay ku jirtay in ay shacabka usoo duceeyaan!
Marka laga yimaado dadkii degenaa hotelka ee dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray, waxaa khasaaro ba’an sidoo kale soo gaaray dad badan oo rayid ah oo wadada marayey iyo kuwo kale oo ku sugnaa makhaayadaha ku dhaw hotelka iyo xarumaha ganacsiga ee ku yaal wadada weyn ee Makkah Al Mukaramah.
Codkan ay baahisay idaacada Al shabaab ayaa muujineysa in kooxdaasi awooda ay weli ku dhex leedahay magaalada Muqdisho, walow uu Madaxweyne Xassan Shiikh uu sheegay in weeraradan ay muujineyso tabardarida kooxdan, inkastoo weerarada noocaan ah ay socdeen tan iyo intuu xilka qabtay.
Weerarada noocaan ah ayaa inta badan waxaa la sheegaa inay sahashato dowlada isla markaana aysan ku sameyn dabagal fiican cida fulisay ama fududeysay in gaadiidka qaraxyada loo adeegsaday ay soo gashaan goobaha la sheegay in amnigooda sida weyn loo sugay.
Title: Al Shabaab oo baahisay cododka kooxdii geysatay Xasuuqii Ambassador – VIDEO